Iintsimbi - enye yeengxaki eziqhelekileyo ezikhulile kunye nesiganeko sezinto ezinzima. Kwakhona ukhathazeka ngamabhinqa, kunye ne-acne ebusheni. Kodwa ngokuqhelekileyo abafazi abaneminyaka engama-30 ukuya ku-35 bayibeka ingqalelo kuphela imibimbi. Kwaye ngokunyamekela ngokufanelekileyo kunye nokubuyiselwa kwesikhumba ebusweni, kufuneka uqaphele iimpawu ezi-4 zokuguga kwesikhumba: i-flabbiness, ubomvu, ukulahleka kombala kunye nemibimbi. Unonophelo olufanelekileyo nolunzulu luya kunceda ukugcina ulusu kwindawo ephilileyo kunye nenhle. Ukuze ugcine ulusu lobuso, udinga ixesha elithile ekhaya uze u tyelele kwi-cosmetologist. Indlela yokunyamekela ulusu emva kweminyaka engama-30, eli phephancwadi liya kuxela.
Imiqondiso ephambili yokuguga kwesikhumba.
Xa uneminyaka yobudala, ulusu luvelisa i-sebum encinci, obangela ukuba ulusu lube lukhuni. Ngenxa yokuhlaziywa kancinci kweeseli zesikhumba, ukuxhatshazwa kwehleko kwaye ukubonakala kubonakala. Ezi ziphumo zikhokelela ekwakheni imibimbi, ngamanye amaxesha, ezinzulu. Ulusu luba lumile kwaye luqala ukucima, amanqaku avela kumacembe kunye nama-acne aphilise kakhulu.
Unokunyamekela njani ulusu ekhaya?
Ukunyamekela kwesikhumba, kufuneka usebenzise ama-moisturizers, kodwa xa ubunzima bebukeka bancinci. Ubume bombuso kufuneka abe namandla, esebenzayo. Kufuneka kuphuculwe kunye nokubuyisela isakhiwo sesikhumba. Ezi zixhobo nazo zisetyenziselwa njenge-peel peel, ekhawuleza inkqubo yokuvuselelwa kweseli.
Ukwandisa umphumela wokubuyisela, kucetyiswa ukunciphisa ukubonakalisa ubuso obubonakalayo, kwaye kuncinci kunokwenzeka ukuba ugubhe isikhumba ngezandla.
Ukunyamekelwa kwesikhumba kumgqirha okanye kwi-beautician.
Iilononi zinika iinkonzo ezahlukeneyo kumbimbi ("Botox", laser, peeling kunye nabanye). Kodwa ukuphumeza umphumo obonakalayo kufuna i-set of procedures, efuneka iphindwe rhoqo. Ngelishwa, ezo nkonzo zibiza.
Iiseli zomzimba wethu zihlaziywa ngokukhawuleza kunye nobudala, oku kusebenza nakubuso - ulusu lulahlekelwa ukuqina kwe-elasticity kunye nesimo esilungileyo, okubangela ukugqithisa okunye, ukuphazamiseka, ukugqithiswa kwamagama, ukugqithisa. I-Genetic predisposition, ukuguquguquka kwesisindo rhoqo kunye nokukhanya kwelanga kuphazamisa imeko kwaye kubangele ukungonakaliswa ngokukhawuleza kwimeko yayo.
Ukunyamekelwa kwesikhumba ekhaya.
Ukubuyisela ukunyaniseka kolukhuni kunzima kakhulu, oku kufuna iinkqubo zobugcisa, ukuhlaselwa komzimba. Kodwa emva kweminyaka engama-30, isikhumba sinokugcinwa kwimeko enhle nakwikhaya, oku kufuna i-hydration efanelekileyo. Ungasebenzisa i-moisturizer, kodwa i-cream ayifanele ibe "nzima", njengoko ingenza ngcono ukubonakala kwee-pores. Ewe, ukuba i-krimu iqukethe i-vitamin A (retinol), i-whey igcwele i-vitamin C, i-alpha-hydroxide kunye ne-beta-hydroxide acid. Ezi ziqulatho ziqulethwe kwiidrama zasebusuku, ezibangela ukuhlaziywa ngokukhawuleza nokubuyiselwa kwesikhumba sombuso.
Ukuba akukho mnqweno wokubamba oogqirha kunye nokwenza okanye ukwenza i-brach, kunokwenzeka ukujongana ne-cosmetian. Ngethuba lethu kwi-arsenal yeengcali yintengo enkulu yemali ebangela ukubuyiswa ngokukhawuleza kwesikhumba kunye nemveliso ye-collagen. Ngombulelo kwezixhobo ezinjalo, u-elasticity and elasticity ziphuculwe.
Ukunyuka kwegazi kunye nokubomvu kwesikhumba.
Ngokweminyaka, ulusu luba lukhulu, imilambo yegazi ibonakala ngakumbi. Kwiimeko ezixhalabileyo, kulula ukubetha. Ukuba usemncinci kwesikhumba ngokukhawuleza, uya kuba ngumntu omdala, imeko iya kuba yimbi kakhulu.
Ukunyamekela, kufuneka usebenzise ukhilimu enezithako ezisebenzayo kunye neeserawu. Xa usebenzisa i-cream, kufuneka uqaphele ngokukhawuleza ukusabela kwesikhumba kumacandelo esilwayo. Ngenxa yesikhumba esichukumisayo, zinokuba nzima nakakhulu. Ukuqwalasela i-stannosti, ukutshisa, ukubetha. Ukuba emva kokusebenzisa izilwanyana kukho iimvakalelo ezinjalo, ngoko ayikufanelanga. Tshintsha ukutya kwakho, zama ukutya itiye eluhlaza, i-soy okanye i-idebenon.
Oogqirha basebenzisa ukhilimu okhethekileyo wesikhumba esibucayi kunye nokunika iipilisi ezikhethekileyo. Kwakhona ujonge kwi-laser eyanceda ukuphucula imeko yemithambo yegazi. Xa iinkqubo ezininzi zenziwa ngugqirha, imeko yesikhumba iphucula. Kodwa ukusebenza kwenkqubo enjalo kungenakuncedo ngokupheleleyo, ukuba awusebenzisi i-sunscreen.
Ukubonakala kwemibonakalo kuyasikhathaza kakhulu kuthi, kodwa nangakumbi kunokukhuphaza ukubonakala kweendawo ezinemibala. Isizathu sokubonakala kwimibala enemibala ingaba yindlalifa, ukukhanya kwelanga, njl njl
Ukuthintela ukubonakala kweentlobo eziluhlaza, kuyimfuneko ukusebenzisa ama-creams aqukethe iivithamini A, C. Isiphumo sokusetyenziswa rhoqo kwesi sikhilimu - ulusu luba lubala, luhle. Amabala amancinci angabonakali. Ukuphucula umphumo, sebenzisa ukukhanya okukhanyayo. Ukutshiza kufuneka kusetyenziswe kanye ngeveki, okanye ngaphantsi kwexesha-kuxhomekeke kwimeko yesikhumba. Siyabulela ukusetyenziswa kwe-scrub, ukuhlengahlengiswa kweseli kuya kuphucula, ukuhamba kwegazi kuya kwanda, kubangele ubume obubhetele. Kwakhona kuyimfuneko ukukhusela isikhumba ekungangeni kwilanga, kufuneka usebenzise i-sunscreen. Ukuze ufihle ivele ivele iindawo ezinemibala, ungasebenzisa ukhilimu kunye nomphumo wokushisa ilanga.
Ukunyamekelwa kwesikhumba kwi-cosmetologist okanye ugqirha.
Xa unesincinci, kungekhona iindawo ezichazwe ngee-pigment, ke kufuneka uzame ukukhangela imichiza. Kwimihlaba emikhulu, isethi yeenkqubo kunye nokusetyenziswa kwe-IMP (ukukhanya kokukhanya) kucetyiswa. Inkqubo enjalo yinkqubo ngokuthe ngcembe kwaye isusa ngokupheleleyo iindawo eziluhlaza.
Kwenzeka ngokukhawuleza ukubeka umyalelo kumntu kunye nokuba libiza kangakanani
I-horoscope yoBuntu kwi-Cancer ngo-2010
Indlela yokwenza ngokukhawuleza imilenze emihle
I-Snack "I-Dragon's Breath"
IiNgcaciso zeeRafa zeeReport
Indlela yokwenza inhalation ekhaya?
Izityalo ezingaphakathi: i-allamanda
Imisebenzi, indlela yokuphinde ithembele ngumphathi
I-Horoscope yeSagittarius Mfazi ngoJulayi 2017
Iisanti kunye neentlanzi kunye neklabishi